Bɛn Yehowa (Yakobo 4:8) | Adesua Nsɛm
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Mixe Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Dɛn na yɛbɛyɛ na kɔmputa anaa mfiri a aba so anaa yɛn apɔwmuden ho nsɛm antwe yɛn amfi Yehowa ho?
Yɛbɛyɛ dɛn anya sika ho adwene a ɛfata? Yɛbɛyɛ dɛn akwati ahomaso?
Dɛn na yɛbɛyɛ na yɛabata Yehowa ho daa?
1, 2. (a) Ɔkwan bɛn na Satan fa so daadaa nnipa? (b) Dɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛabɛn Onyankopɔn?
YEHOWA NYANKOPƆN bɔɔ nnipa sɛ wɔmmɛn no. Nanso Satan pɛ sɛ yenya adwene sɛ yenhia Yehowa. Eyi yɛ atosɛm. Efi bere a Satan daadaa Hawa wɔ Eden turo mu hɔ tɔnn no, wabɔ mmɔden sɛ ɔbɛsɛe nnipa adwene. (Gen. 3:4-6) Efi saa bere no reba nyinaa nnipa pii susuw sɛ wonhia Onyankopɔn.
2 Nanso yɛn de, ɛnsɛ sɛ yɛma Satan afiri no yi yɛn, efisɛ “yenim n’akwan.” (2 Kor. 2:11) Satan pɛ sɛ yesi gyinae a ɛbɛtwe yɛn afi Yehowa ho. Nanso adesua a edi eyi anim no ma yehui sɛ, sɛ ɛba adwumasɛm, anigyede, ne abusuasɛm a, yebetumi asi gyinae pa. Adesua yi nso bɛma yɛahu nneɛma anan bi a ebetumi atwe yɛn afi Yehowa ho: kɔmputa ne mfiri a aba so, apɔwmuden, sika, ne ahohoahoa. Adesua no bɛboa yɛn ma yɛasi gyinae pa wɔ eyinom ho na ‘yɛabɛn Onyankopɔn.’—Yak. 4:8.
KƆMPUTA NE MFIRI A ABA SO
3. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ kɔmputa ne mfiri a aba so yɛ ɔdomfo-kumfo?
3 Ɛnnɛ, kɔmputa ne mfiri a aba so ahyeta wiase baabiara. Sɛ yɛde saa mfiri yi di dwuma yiye a, ebetumi aboa yɛn paa. Nanso sɛ yɛamfa anni dwuma yiye a, ebetumi atwe yɛn afi yɛn soro Agya no ho. Kɔmputa betumi aboa yɛn wɔ nneɛma pii mu. Wo de, hwɛ nsɛmma nhoma a worekenkan yi. Kɔmputa na yɛn nuanom de kyerɛw tintimii. Kɔmputa tumi boa yɛn ma yɛyɛ nhwehwɛmu, yetumi de di nkitaho, na ɛtɔ bere bi nso a yetumi de gyigye yɛn ani. Nanso sɛ yɛanhwɛ yiye a, yɛn adwene nyinaa bɛyɛ “kɔmputa, kɔmputa.” Wɔn a wɔtɔn saa nneɛma no fa nyansakwan so ka ho asɛm ma ɛbɛyɛ sɛ ɛsɛ sɛ wunya nea aba so foforo biara bi. Ná aberante bi pɛ kɔmputa bi a aba so foforo araa ma onhu nea ɔnyɛ ne ho. Enti owiaa ne ho kɔɔ baabi ma woyii n’asaabo biako, na ɔtɔn de kɔtɔɔ kɔmputa no. Wo ara hwɛ, awerɛhosɛm!
4. Bere a onua bi hui sɛ kɔmputa agye ne bere nyinaa no, dɛn na ɔyɛe?
4 Nea enye koraa ne sɛ yɛbɛma mfiri a aba so asɛe yɛne Yehowa ntam. Sɛ yɛanhwɛ yiye a, yɛde bɛyɛ nneɛma a ɛmfata anaasɛ yɛbɛsɛe yɛn bere nyinaa wɔ ho. Onua bi a wɔfrɛ no Jon a ɔrekodi mfe 30 kae sɛ: “Minim sɛ Bible ka sɛ ‘yɛntɔ bere a yebenya biara’ mfa nsua Yehowa ho ade. * Nanso kɔmputa ama madi me ho aborɔ.” Jon tumi tena kɔmputa ho araa kosi anadwo dasum. Ná ɔne nkurɔfo di nkitaho wɔ kɔmputa so hwɛ video nso wɔ so. Ɛtɔ da bi a na ɔhwɛ video a ɛnyɛ papa mpo. Ɔkae sɛ bere a wabrɛ no, ɛno mpo na ɛyɛ den ma no sɛ ɔbɛsɔre afi ho. Na Jon pɛ sɛ ogyae subammɔne yi, enti ɔyɛɛ biribi wɔ kɔmputa no so a sɛ edu bere a ɛsɛ sɛ ɔda a, na ɛno ankasa adum.—Monkenkan Efesofo 5:15, 16.
5, 6. (a) Asɛyɛde bɛn na awofo wɔ wɔ wɔn mma ho? (b) Dɛn na awofo bɛyɛ na wɔn mma anya nnamfo pa?
5 Awofo, enhia sɛ mode mo ani di biribiara mo mma reyɛ akyi, nanso ɛsɛ sɛ mohwɛ sɛnea wɔde kɔmputa di dwuma. Munnnyaa wɔn mmma wɔnnhwɛ ɔbrasɛe, awudisɛm, ne ahonhonsɛm wɔ Intanɛt so, anaa wɔmmɔ fekubɔne wɔ so. Awofo, sɛ moka sɛ mo mma rehaw mo adwene, enti wɔnkɔtena kɔmputa ho mfa nnyigye wɔn ani a, wobenya adwene sɛ mfomso nni ho sɛ wɔbɛhwɛ nneɛma a ɛmfata yi. Ɛyɛ mo asɛde sɛ mobɔ mo mma nkumaa ne mmabun nyinaa ho ban na biribiara antwe wɔn amfi Yehowa ho. Ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ mmoa mpo bɔ wɔn mma ho ban na asiane anto wɔn. Wo de, hwɛ nea osisi bɛyɛ bere a obi pɛ sɛ ɔkyere ne ba!—Fa toto Hosea 13:8 ho.
Awofo, mommoa mo mma ma wɔmfa kɔmputa nni dwuma yiye
6 Boa wo mma ma wɔmfa Kristofo mpanyin ne mmofra a wɔwɔ suban pa nnamfo. Nanso kae sɛ wo mma hia wo. Wɔpɛ sɛ wo ara wunya bere ma wɔn! Enti wo ne wɔn mmom nserew, mommom nni agoru, na mommom nyɛ adwuma. Eyi bɛma ‘moabɛn Onyankopɔn.’ *
7. Dɛn nti na yɛn nyinaa pɛ sɛ yenya apɔwmuden?
7 Yɛtaa bisa nkurɔfo sɛ wɔn apɔw mu te dɛn. Eyi ma yehu nokwasɛm bi. Esiane sɛ yɛn awofo a wodi kan maa Satan twee wɔn fii Yehowa ho nti, yare bɔ yɛn nyinaa. Sɛ Satan nyae a anka daa na yɛyare efisɛ yɛyare a, ɛyɛ den ma yɛn sɛ yɛbɛsom Yehowa. Na sɛ yewu a, ɛnde yɛrentumi nsom no koraa. (Dw. 115:17) Enti yɛpɛ sɛ yɛyɛ nea yebetumi biara nya apɔwmuden. * Afei nso ɛsɛ sɛ yɛboa yɛn nuanom ma wonya apɔwmuden.
8, 9. (a) Dɛn na yɛbɛyɛ na yɛannwinnwen yɛn apɔwmuden ho antra so? (b) Dɛn nti na eye sɛ yenya anigye koma?
8 Nanso ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye na yɛanyɛ ade antra so. Ebinom ka nnuan ne nnuru ne ayaresa bi ho asɛm dodo. Nsi ne ahokeka a wɔde ka ho asɛm no kyɛn nea wɔde ka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no mpo. Ebia wogye di paa sɛ ebetumi aboa afoforo. Sɛ saa mpo a, ɛmfata sɛ yɛbɛtɔn nnuru bi anaa yɛbɛbɔ ayaresa bi ho dawuru wɔ Ahenni Asa so anaa yɛbɛyɛ saa wɔ nhyiam ahorow ase. Adɛn ntia?
9 Nea enti a yehyiam ne sɛ yebesua Bible na Onyankopɔn honhom kronkron aboa yɛn ma yɛn ani agye. (Gal. 5:22) Sɛ yehyiam na yɛkɔfa nnuru anaa ayaresa bi ho asɛm ba a, ebeyi yɛn adwene afi honhom fam nneɛma so. Bio nso ebetumi asɛe afoforo anigye. (Rom. 14:17) Nea obi bɛyɛ wɔ n’apɔwmuden ho yɛ ɔno ankasa asɛm. Nanso ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ obiara nni hɔ a ɔwɔ yare biara ano aduru. Dɔkotafo akukudam mpo bɔ nkwakoraa ne mmerewa, na wɔyare wu. Sɛ yedwinnwen yɛn apɔwmuden ho dɛn koraa a, yɛrentumi nto yɛn nkwa nna mu. (Luka 12:25) Nanso “anigye koma sa yare.”—Mmeb. 17:22.
10. (a) Dɛn na ɛma Yehowa hu obi sɛ ne ho yɛ fɛ? (b) Yɛbɛyɛ dɛn anya apɔwmuden a edi mũ?
10 Afei nso yɛn nyinaa pɛ sɛ yɛn ho yɛ fɛ. Nanso ɛnsɛ sɛ yɛyɛ nneɛma tra so sɛnea ɛbɛyɛ a afoforo behu yɛn sɛ mmerante anaa mmabaa. Bible ka sɛ: “Atifi dwen, sɛ wohu no trenee kwan so a, ɛyɛ abotiri a ɛyɛ fɛ.” (Mmeb. 16:31) Enti mpanyinyɛ kura nidi ne ahoɔfɛ ankasa. Saa na Yehowa hu no, na ɛsɛ sɛ yɛn nso yehu no saa. (Monkenkan 1 Petro 3:3, 4.) Sɛ saa na asɛm no te a, wohwɛ a ɛbɛyɛ papa sɛ ahoɔfɛ nti wobɛyɛ oprehyɛn anaa wobɛsrasra nku bi anaa wobɛnom nnuru bi a ɛde w’apɔwmuden anaa wo nkwa bɛto asiane mu? Sɛ woanyin oo, wusua oo; wo ho yɛ den oo, wo ho nyɛ den oo, kae sɛ “Yehowa mu anigye” na ɛma yɛn nyinaa ho yɛ fɛ ankasa. (Neh. 8:10) Wiase foforo no mu na yebenya apɔwmuden a edi mũ. Saa bere no na yɛbɛsan asi yɛn mmerantebere ne yɛn mmabaabere mu. (Hiob 33:25; Yes. 33:24) Bere a yɛretwɛn no, ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani da hɔ na yenya gyidi sɛ Yehowa bɔhyɛ bɛbam. Eyi bɛma yɛn ani agye na yɛabɛn Yehowa na yɛde yɛn bere adi dwuma yiye.—1 Tim. 4:8.
11. Ɔkwan bɛn so na sika betumi asum yɛn afiri?
11 Ɛnyɛ bɔne sɛ obi benya sika anaa ɔbɛyɛ adwuma apɛ sika. (Ɔsɛnk. 7:12; Luka 19:12, 13) Nanso “sikanibere” betumi atwe yɛn afi Yehowa ho. (1 Tim. 6:9, 10) “Wiase yi mu dadwen” anaa asetena mu nneɛma a yebedwen ho dodo betumi ayɛ sɛ nsɔe amia yɛn som. Afei nso sɛ yenya adwene sɛ sika bɛma yɛn ani agye na abɔ yɛn ho ban a, na yɛrema ‘ahonyade adaadaa’ yɛn. (Mat. 13:22) Yesu maa emu daa hɔ sɛ “obiara ntumi” nsom Onyankopɔn ne ahonyade.—Mat. 6:24.
12. Ɔkwan bɛn na nnipa pɛ sɛ wɔfa so nya sika bum ɛnnɛ? Yɛbɛyɛ dɛn asi gyinae pa?
12 Sɛ yɛannya sika ho adwempa a, ebetumi ama yɛayɛ bɔne. (Mmeb. 28:20) Ebinom nyae a anka wɔbɛda asɔre no na wɔda apem so, enti wɔtow kyakya. Anuanom binom de wɔn ho hyɛ nnwuma bi mu sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya sika bum bere tiaa bi; wɔtwetwe asafo no mufo kɔhyɛ mu. Anuanom bi nso ama nkurɔfo adaadaa wɔn sɛ, sɛ wɔde sika hyɛ adwuma bi mu a, wobenya wɔn ho tam, nanso wɔn nsa asi fam. Sɛ yɛma yɛn ani bere sika a, ɛbɛma yɛde yɛn ti akɔhyɛ adwuma bi mu ma nkurɔfo abu yɛn afa so. Enti ma w’ani nna hɔ. Nnya adwene sɛ wubetumi anya wo ho da koro pɛ.
13. Adwene bɛn na Yehowa pɛ sɛ yenya wɔ sika ho?
13 Sɛ yɛde “ahenni no ne Onyankopɔn trenee” di kan a, Yehowa behyira adwuma a yɛyɛ so ma yɛanya nea yehia. (Mat. 6:33; Efe. 4:28) Yehowa mpɛ sɛ yɛyɛ adwuma boro so na yɛkɔda wɔ Ahenni Asa so anaa yedwinnwen sika ho wɔ hɔ. Nanso wiase mu nnipa pii susuw sɛ, sɛ wobiri wɔn mogya ani pɛ sika a, ɛbɛbɔ wɔn ho ban na daakye wɔn asɛm anyɛ mmɔbɔ. Wɔtaa de sikapɛ hyɛ wɔn mma adwenem. Yesu kyerɛe sɛ adwene a ɛte saa mfata. (Monkenkan Luka 12:15-21.) Eyi ma yɛkae Gehasi. Na osusuw sɛ n’ani betumi abere sika na bere koro no ara wanya din pa wɔ Yehowa anim.—2 Ahe. 5:20-27.
14, 15. Dɛn nti na nyansa nnim sɛ yɛde yɛn ho bɛto sika so? Ma nhwɛso.
14 Asɛm yi te sɛ ɔkɔre bi a wakɔkyere apataa wɔ nsu mu. Ɛtɔ da bi a na apataa no mu yɛ duru sɛ ɔkɔre no de betu, nanso adifudepɛ nti ontumi nnyae mu, enti ebewie ase na ɔne apataa no nyinaa akɔhyɛ nsu no ase. Biribi a ɛte saa betumi ato Kristoni anaa? Asafo mu panyin bi a wɔfrɛ no Alex kae sɛ: “Me sika nkɔ agoru. Sɛ mereguare a, mempɛ sɛ samina ketewa bi mpo bɛsɛe kwa.” Nanso Alex nyaa adwene sɛ, sɛ ɔde ne sika kɔhyɛ aguadi bi mu a, obenya so mfaso. Ɛba saa a, obegyae adwuma a ɔyɛ akɔyɛ akwampae adwuma. Afei ɔhwehwɛɛ ɔkwan a ɔbɛfa so anya mfaso pii, enti ɔde ne sika a ɛda hɔ nyinaa kɔhyɛɛ adwuma bi mu. Ɔkɔbɔɔ bosea mpo de hyɛɛ adwuma no mu. Nanso nneɛma gye gui koraa ma ɔbɔɔ ka kɛse. Alex kae sɛ: “Na mawe ataa so sɛ meremma me sika nka mu. Mekae wɔ me tirim sɛ, nea ehia ara ne abotare; ɛrenkyɛ mɛsan anya me sika bio.”
15 Efi saa bere no, na ade a Alex dwen ho ara ne sika a ɔde ahyɛ adwuma no mu no. Ne som yɛɛ basaa, na ɔkɔ kɛtɛ so a ɔnna. Alex anidaso yɛɛ kwa. Ne sika nyinaa hyewee, na ewiee ase no, ɔtɔn ne fie. Ɔkae sɛ: “Memaa m’abusua dii yaw.” Nanso osuaa biribi fii asɛm no mu. Ɔno ankasa gye toom sɛ: “Obiara a ɔde ne werɛ hyɛ Satan wiase yi mu no nsa besi fam ma ne werɛ ahow.” (Mmeb. 11:28) Nokwasɛm ni, sɛ yɛde yɛn werɛ hyɛ yɛn sika mu anaa yɛde yɛn ho to yɛn adwuma so wɔ saa wiase yi mu a, nea ɛkyerɛ ne sɛ yɛde yɛn ho reto Satan a ɔne “wiase yi nyame” so. (2 Kor. 4:4; 1 Tim. 6:17) Seesei Alex ayɛ ne ho wiɛmfoɔ na onya bere pii ka asɛmpa no. Eyi ama ɔne n’abusua ani agye paa, na wɔabɛn Yehowa kɛse.—Monkenkan Marko 10:29, 30.
16. Ahohoahoa bɛn na ɛyɛ papa? Sɛ yebu yɛn ho tra so a, dɛn na ebefi mu aba?
16 Mfomso biara nni ho sɛ yɛde adepa bɛhoahoa yɛn ho. Enti sɛ yɛhoahoa yɛn ho sɛ yɛyɛ Yehowa Adansefo a, ɛyɛ ne kwan so. (Yer. 9:24) Eyi na ɛboa yɛn ma yesi gyinae pa na yɛbɔ bra pa. Nanso sɛ yebu yɛn ho tra so anaa yɛma yɛn ho so a, ebetumi atwe yɛn afi Yehowa ho.—Dw. 138:6; Rom. 12:3.
Fa anigye yɛ asɛnka adwuma no, mfa w’ani nsi asafo no mu dibea so!
17, 18. (a) Hena na Bible ka sɛ ɔbrɛɛ ne ho ase, na henanom na ɛka sɛ wɔmaa wɔn ho so? (b) Ɔkwan bɛn so na onua bi amma ahomaso antwe no amfi Yehowa ho?
17 Sɛ yɛkan Bible a, yehu nnipa a wɔmaa wɔn ho so ne wɔn a wɔbrɛɛ wɔn ho ase. Ɔhene Dawid brɛɛ ne ho ase maa Yehowa kyerɛɛ no kwan, na Yehowa hyiraa no. (Dw. 131:1-3) Nanso Ɔhene Nebukadnesar ne Belsasar ahomaso nti Yehowa brɛɛ wɔn ase. (Dan. 4:30-37; 5:22-30) Ɛnnɛ nso yebetumi ahyia tebea bi a ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛbrɛ yɛn ho ase. Onua bi a wɔfrɛ no Ryan a wadi mfe 32 kɔɔ asafo foforo mu. Ɔkɔɔ hɔ no na ɔyɛ asafo mu somfo. Ryan kae sɛ: “Na mehwɛ kwan sɛ ɛrenkyɛ koraa wɔbɛpaw me ɔpanyin, nanso afe twaam a mante hwee.” Ryan bo fuw mpanyimfo no sɛ wɔanyɛ no ɔpanyin anaa? So ogyaee adesua kɔ maa ahomaso twee no fii Yehowa ne asafo no ho? Sɛ ɛyɛ wo a, anka dɛn na wobɛyɛ?
18 Ryan yɛɛ nhwehwɛmu wɔ asafo nhoma mu, na eyi boaa no ma onyaa abotare twɛnee. (Mmeb. 13:12) Ɔkae sɛ: “Mihui sɛ na ehia sɛ minya abotare ne ahobrɛase ma Yehowa tete me.” Ryan hui sɛ ɛsɛ sɛ ɔde ne bere pii boa afoforo wɔ asafo no mu na ɔde ahokeka yɛ asɛnka adwuma no. Afei onyaa nnipa pii ne wɔn suaa Bible ma wonyaa nkɔso. Ɔkae sɛ: “Afe ne fã akyi no, wɔpaw me sɛ ɔpanyin. Nokwasɛm ne sɛ na m’ani nna so. Na asɛnka adwuma no ayɛ me dɛ, enti na m’adwene afi so koraa.”—Monkenkan Dwom 37:3, 4.
19, 20. (a) Dɛn na yɛbɛyɛ na yɛamma biribiara antwe yɛn amfi Yehowa ho? (b) Henanom na wɔbataa Yehowa ho a yebetumi asuasua wɔn?
19 Nsɛm a yɛasusuw ho wɔ adesua yi ne nea edi eyi anim mu no fata. Yɛhoahoa yɛn ho sɛ yɛyɛ Yehowa asomfo. Yɛn abusua betumi ama yɛn ani agye. Apɔwmuden nso yɛ akyɛde kɛse a efi Yehowa hɔ. Yenim sɛ adwuma ne sika betumi aboa yɛn ma yɛanya nea yehia. Afei nso anigyede ne mfiri a aba so betumi aboa yɛn. Nanso ɛsɛ sɛ yehu sɛ, sɛ yɛamfa saa nneɛma yi biara anto nea ɛda anaa yɛma etwitware yɛn som mu a, ebetumi atwe yɛn afi Yehowa ho.
Mma biribiara ntwe wo mfi Yehowa ho!
20 Satan pɛ sɛ wotwe wo ho fi Yehowa ho. Nanso wubetumi abɔ wo ne w’abusua ho ban na biribi a ɛte saa anto mo. (Mmeb. 22:3) Bɛn Yehowa na bata ne ho daa. Bible mu nhwɛso pii wɔ hɔ a ebetumi aboa yɛn. Enok ne Noa “ne nokware Nyankopɔn nantewee.” (Gen. 5:22; 6:9) Mose kɔɔ so “tintimii te sɛ nea ohu Onii a wonhu no no.” (Heb. 11:27) Yesu yɛɛ nea ɛsɔ ne soro Agya no ani bere nyinaa, enti Onyankopɔn nso taa n’akyi. (Yoh. 8:29) Suasua saa nkurɔfo yi. Bible ka sɛ: “Mo ani nnye bere nyinaa. Munnnyae mpaebɔ da. Biribiara mu momfa aseda mma.” (1 Tes. 5:16-18) Si wo bo sɛ woremma biribiara ntwe wo mfi Yehowa ho!
^ nky. 4 Wɔasesa din ahorow no.
^ nky. 6 Hwɛ asɛm a ɛbaa January 2012 Nyan! mu a n’asɛmti ne: “Sɛnea Wobɛtete Mmofra Yiye.” (Borɔfo de no yɛ October 2011.)
^ nky. 7 Hwɛ asɛm a ɛbaa March 2011 Nyan! (Borɔfo de no) mu a n’asɛmti ne “Five Keys to Better Health” (Nneɛma Anum a Ɛboa Ma Yenya Apɔwmuden).